Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zase-Egypt eziQhekezayo » Iinqwelomoya ezisuka eRussia zisiya eJiphutha iiRekhodi zoLwandle oluBomvu
Airlines • isikhululo • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zase-Egypt eziQhekezayo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Iindaba zaseRashiya eziQhekezayo • Safety • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Agasti 10, 2021
I-Russia iphinde yaqala ngenqwelomoya ukuya kwiindawo zokufihla oLwandle oluBomvu zase-Hurghada nase-Sharm el-Sheikh, ephelisa isibhengezo esathatha phantse iminyaka emithandathu emva kokuqhushumba kwenqwelomoya yaseRussia eyabulala bonke abantu abangama-224 ababekhwele.
Iinqwelomoya ezintathu ezithe ngqo ezivela eMoscow zafika kwezi zixeko zibini zase-Egypt ngoMvulo.
UHurghada wamkele iindwendwe ezimbini ezivela eRashiya.
USharm el-Sheikh wamkele inqwelomoya yokuqala esuka eRashiya kwiminyaka emi-6.
Umphathiswa Wezobuchwephesha base-Egypt wabhengeza ukuba zintathu Iinqwelomoya ezihamba ngqo ezivela eMoscow zafika kwizixeko ezibini zokungcebeleka zase-Egypt izolo, ngeHurghada esamkela bobabini kwaye uSharm el-Sheikh ebamba enye.
I-Russia igqibile ukuvala ukubhabha kwayo e-Egypt okwathatha phantse iminyaka emithandathu, kulandela ukuqhushumba kwenqwelomoya yabakhweli eyabulala bonke abantu abangama-224 ababekhwele, yaphinda yaqala iinqwelomoya ukusuka eMoscow ukuya kwiindawo ekuchithelwa kuzo uLwandle oluBomvu lwase-Egypt i-Hurghada kunye Umtsalane el-Sheikh NgoMvulo.
“Ezi nqwelo-moya zintathu ziphawule ukuqala kwenqanaba elitsha lokuqalisa kwakhona ukhenketho lwaseRussia kwiidolophu ezimbini zoLwandle oluBomvu Hurghada kunye no-Sharm El-Sheikh, ”utshilo uMphathiswa we-Aviation yase-Egypt kwingxelo.
Iinqwelomoya zaseRussia zamkelwa ngesikhahlelo sokukhahlela amanzi njengesiko lokufumana iinqwelomoya ezintsha emva kokufika, ngelixa abasebenzi besikhululo seenqwelomoya bamkela iindwendwe ngeeroses, izikhumbuzo kunye nomculo wasentsomini.
Iinqwelomoya ezithe ngqo eziya kuLwandle oluBomvu zincedisa kwiinqwelomoya eziqhubekayo zemihla ngemihla phakathi kweCairo neMoscow, ngeenjongo zokutsala elona nani likhulu labakhenkethi baseRussia abaya e-Egypt, u-Abul-Enein, u-CEO we-EgyptAir Airlines uthe.
Zisixhenxe iinqwelo moya eziya ngqo kuLwandle oluBomvu izixeko ezingena ngeveki, kwaye nganye inokuhlalisa abakhweli abangama-301 ukuhlangabezana neemfuno ezilindelekileyo zabakhenkethi baseRussia, ngelixa iinqwelomoya zaseRussia zilungiselela iinqwelomoya ezintlanu ngaxeshanye, utshilo.
I-Russia ikwindawo yezona ntengiso zibalulekileyo e-Egypt, njengoko inani labakhenkethi bayo base-Egypt lidlula i-3.1 yezigidi ngo-2014, phantse iipesenti ezingama-33 zabakhenkethi abangena kulo nyaka, utshilo uLamia Kamel, umncedisi umphathiswa wezokhenketho nezinto zakudala yoKwazisa.
Uqinisekisile ukuba bonke abasebenzi kwiihotele, iindawo zolonwabo kunye neemyuziyam baye bagonyelwa i-COVID-19.
"Abakhenkethi baseRussia babevuya ukubuyela eHurghada naseSharm el-Sheikh ukonwabela iilwandle ezishushu, imozulu entle, kunye nolwandle," utshilo uKamel.
Ukuhamba ngakumbi kwabakhenkethi kuya kuba negalelo ekudaleni imisebenzi emitsha e-Egypt, ngakumbi ngexesha lobhubhane, ngenani leenqwelo moya ezisuka eRashiya ziye eHurghada naseSharm el-Sheikh ekugqibeleni zinyuka zaya kwi-20 ngeveki.
Ngo-Okthobha u-2015, i-Russia yamisa iinqwelomoya ngokuthe ngqo kwizikhululo zeenqwelomoya zase-Egypt emva kwengozi yenqwelomoya yase-Russia e-North Sinai. Ukusukela ngoko, i-Egypt isebenze ekuphuculeni amanyathelo okhuseleko kunye nokhuseleko kuzo zonke izikhululo zeenqwelo moya kwilizwe liphela.
Ngo-Epreli 2018, iRussia yaqala kwakhona iinqwelomoya phakathi eMoscow kwaye Cairo, kodwa wagcina ukuvalwa kweenqwelomoya ukuya eHurghada naseSharm el-Sheikh.
Icandelo lezokhenketho liphawula umnyhadala wesine wonyaka
UMnyhadala weFilimu waMazwe ngaMazwe waseZanzibar esiQithini seBoost ...
I-Qatar Airways kunye neRwandAir yazisa ngesiVumelwano seIntanethi
Umphathiswa Wezokhenketho waseJamaica: uKhenketho lweHlabathi oluSebenzayo ...
Ukuhamba ngenqwelomoya ukusuka eIndiya ukuya eCanada kuhlala kunguHayi omkhulu
I-SkyWest ishukumisela ukwenza i-Delta Airlines yonwabe
UMphathiswa waseSeychelles wezoKhenketho kwii-DMC
Ukunyuka kwamaXabiso eKhabhoni yangaphakathi
Ukusinda kweekati ezinkulu zaseAfrika: Izilwanyana zasendle kunye nokhenketho ...
IVenice ngoku ihlawulisa abakhenkethi imali yokungena
Abantu abaninzi benzakele kuqhushumbo lwebhasi yaseRussia
eTurboNews ime emva kweNkululeko yoPapasho kunye nePEN ...
Ukufa, ukonzakala, nomonakalo ochazwe njengenyikima enkulu ...